Alliance for Independent Madhesh (AIM) » मधेश अलग देश बनाएरै छोड्छुः सीके राउत (भिडियो सहित) Alliance for Independent Madhesh
मधेश अलग देश बनाएरै छोड्छुः सीके राउत (भिडियो सहित)
आफूलाई मधेशी अभियान्ता भन्न मन पराउने डा सीके राउत वर्तमान नेपाली राजनीतिको चर्चा र विवादमा रहेका पात्र हुन् । मधेशलाई छुट्टै देश बनाउने अभियानमा रहेका उनले राज्य विप्लवको मुद्धा खेपिरहेका छन् । यही अभियानकै क्रममा उनी पटक पटक पक्राउ पर्दै छुट्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । एकथरी सीके राउतलाई ‘देशद्रोही’को रुपमा हेर्छन् भने मधेशभित्र भने कतिपयको आँखामा उनी ‘मुक्ति योद्धा’ हुन् । तिनै विवादित सीके राउतसँग नेपाली हेडलाइन्सका सरोज गौतम र प्रयास पराजुलीले ‘तपाइँले चाहेको के हो?’ भनेर सोधेका थिए । कुराकानीमा सीके राउतले मधेश छुट्टै देश भएपनि अहिले औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत शोषित र प्रताडित भैरहेको तर्क गर्दै आफ्नो अभियान मधेशलाई औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त गरेरै छोड्ने रहेको बताए । मधेशलाई छुट्टै देश नबनाए सम्म आफूले विश्राम नलिने पनि उनको भनाइ छ । कुराकानीको सम्पादित अंशः -
आफूलाई कसरी चिनाउनु हुन्छ ? तपाइँको अभियान के हो ?
मेरो अभियान औपनिवेशिक शासनमा पिल्सिरहेको मधेसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मुक्ति गराउने हो । स्वतन्त्र तुल्याउने हो । र म त्यसको एक अभियान्ता हो । म नेता वा कुनै पार्टीको अध्यक्ष होइन । मेरो नेतृत्वमा यो अभियान अगाडि बढिरहेको छ ।
एउटा प्राविधिक विषय पढेको मान्छे तपाई कहाँबाट यस्तो विद्रोहको बाटोमा लाग्नुभयो ?
विद्रोह उत्पीडनबाट जागृत हुने कुरा हो । आन्दोलन पढेर गर्ने कुरा होइन । उत्पीडनबाट विद्रोह जन्मिने र त्यहाँबाट समस्याको समाधान गर्ने हो ।
मधेसमा औपनिवेशिक शासन छ भन्ने तपाईको आधार के हो ?
–मधेसमा ९५ प्रतिशत सेना बाहिरबाट ल्याएर राखिएको छ । मधेसमा उपनिवेशको अर्को आधार पहाडबाट शासन गर्नको लागि मानिसहरु आएर बसेका छन् । अहिले पनि नेपाली शासक वर्गका मानिसहरु मधेसमा बसाइँ आउने क्रम तिब्र गतिमा छ । सन् १९५१ मा पहाडी मुलका ६ प्रतिशत जनसंङख्या रहेकोमा २००१ मा पचास प्रतिशत भन्दा बढी भयो । आर्थिक नीतिका कारण पनि मधेस औपनिवेश हो । शासक वर्गका मान्छेहरु त्यहाँ जान्छन् । स्रोत साधन लिएर आउँछन । ७५ प्रतिशत राजश्व उठ्छ तर लगानी भने १० प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन ।
मधेस नै अलग गर्छु भन्ने आँट कसरी गर्नु भो ?
–म विचार पुर्‍याएरै यो अभियानमा लागेको हुँ । जतिबेला गान्धीले बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनुपर्ने अभियान चलाएका थिए उनीहरुले पनि यातना र जेल जीवन भोग्नु परेको थियो । मैले यसलाई एउटा सामान्य प्रक्रियाको रुपमा लिएको छु । कुनै आश्चार्य मान्नु पर्ने कुरा छैन ।
तपाइँको ‘मधेस देश’को भूगोल चाँहि के हो ? कि समथर भूभाग जति मधेश देश हो ?
होइन समथर भूभाग मात्र होइन उत्तरमा चुरे सहित वर्तमान पश्चिम र दक्षिणको सीमानासम्म मधेश देशमा पर्छ । खाली सम्म भूभाग मात्र होइन चुरे सहितको मधेस राष्ट्र हो ।
‘मधेस देश’ बनाउँछौं भन्ने अनि अदालतमा त बयान फेर्नु भयो नि ?
–होइन, मैले बयान फेरेको छैन । नेता र मिडियाले कुरा बङग्याएर जनतालाई दिग्भ्रमित पारेका छन् । मैले खुलेआम रुपमा भनेको छु ।
नेपाललाई ‘रण्डी’ नै भन्नुभयो ? त्यो हदसम्म किन पुग्नु भयो ?
चाहिने भन्दा बढी बदनाम गरिएको हो । यस्तो शब्दावली हाम्रो राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश गरिएको छैन । मेरो आत्मकथामा साहित्यक रुपमा समावेश गरेको हुँ । साहित्यमा कुनै कुरा बुझाउनका लागि विभिन्न शब्द प्रयोग गरिन्छ । मैले किताबमा स्पष्ट रुपमा भनेको छु, यो लेख्नु पर्ने कारण किन आयो ? मधेसमा हुने कुरा र भन्ने कुरामा कति फरक छ ? यी सबै कुराको जवाफ त्यहाँ दिइएको छ ।
तपाइँको उग्र चिन्तनका कारण मधेशीको मुद्धा नै अवसान हुने अवस्थामा छ भन्छन नि ?
धेरै जनाले वास्तविक कारण थाहा पाउँदैछन् । सदरमुकामबाट अहिले सेवा कार्यालयहरु बारम्बार सारिदै छ । किनकी उनीहरुको हात नै बाँधिएको छ । स्वतन्त्रता पाउने कुरा हो ।
एक मधेस एक प्रदेशमा जाने त राज्यले सहमति नै गरेको छ । यो मुद्दालाई कसरी विस्थापित गर्नुहुन्छ ?
–एक मधेस एक प्रदेशले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । अहिले त्यो मुद्दामा आकर्षण छैन । स्वतन्त्र मधेस भयो भने मात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ ।
मधेसलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्नु राष्ट्रियता विरोधी कुरा भएन र ? यसो गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुँदैन ?
–हामीले मधेस सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अलग्गै देशको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट रुपमा भनेका छौं । राष्ट्रियता कसको कमजोर हुने भनेको ? मधेसी राष्ट्रियता झन बलियो हुन्छ भन्ने कुरा हो । अलग मधेस राष्ट्र बनाउँदा राष्ट्रियता कमजोर हुँदैन ।
तपाईलाई मधेस छुट्टै देश बन्छ भन्ने विश्वास छ ?
–जनताले चाहेको अवस्थामा हुन्छ । विश्वमा जनताको शक्तिबाट यस्ता धेरै राष्ट्र बनेका छन् । ३० बर्षको आँकडा हेर्ने हो भने ३५ वटा देशहरु स्वतन्त्र भएका छन् । जनमत संग्रह होस कि सडक संघर्ष जनताले चाहेको अवस्थामा छुट्टै राष्ट्र बनाउन सक्छन् ।
मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने आधार के हो ?
–पहिला त जनमत निर्माण गर्ने कुरा हो । समस्या के हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्‍यो । यसको समाधान के हो ? संघीयता कि छुट्टै देशको स्थापना ? जनताले विस्तारै कुरा बुझ्दै छन् । स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा जनमत उर्लिएर आएको छ । मधेसी जनता स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा उर्लिएर आएका छन् । वस्तुगत रुपमा उपनिवेशिक शासनले ग्रसित छ भने त्यो मुक्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । मधेसको ऐतिहासिक आधार गोर्खालीहरुले अतिक्रमण गर्नुभन्दा अघि हाम्रो आफ्नै राजा हुने गर्दथ्यो । त्यो आधारमा पनि मधेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेका छौं । सन् १८१६ र १८६० सन्धी मार्फत अंग्रेजहरुले नेपालको राजालाई प्रदान गरेको हो । १९५० मा नेपाल–भारतीबीच भएको सन्धीमा लेखिएको छ– सबै सन्धी र सम्झौताहरु खारेज हुनेछन् । खारेज हुनु भनेको अंग्रेजले राजालाई दिएको राज्य पनि खारेज हुनु हो । यो आधारमा मधेस स्वतन्त्र राष्ट्र हुन आउँछ ।
बजेट र पीडाकै कुरा गर्ने हो भने त मधेसको भन्दा बढी पीडा कर्णालीले खेपेको छ यसलाई पनि उपनिवेश भन्ने कि नभन्ने ?
–पीडित हुँदैमा उपनिवनेश भन्ने कुरा हुँदैन । कर्णालीमा मानिसहरु बढी गरिब होलान् । गरिब हुने वित्तिकै औपनिवेशबाट प्रताडित भन्न मिल्दैन । कर्णाली जस्तो भएपनि त्यहाँका मान्छेलाई नेपाली हौइनौ भनेर त्यति साह्रो हेपिदैन । नागरिकताबाट बञ्चित गरिदैन । मधेसी जनताले जतिको दंगा भोग्नु पदैन ।
तपाईले उठाएको मुद्दा संघीयताले सम्बोधन गर्दैन ?
–कसैलाई हात बाँधेर दुई छाक खाना खुवाउनु समस्याको समाधान होइन । समाधान भनेकै हात खोल्नु नै हो । औपनिवेशक शासन जहाँ हुन्छ त्यसको समाधान भनेकै स्वतन्त्रता हो । संघीयताले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । संघीयता आउँदैमा मधेसमा अहिले रहेका सेना हट्दैन । किनकी सुरक्षा केन्द्र मातहत नै रहन्छ । बसाई सराई बेरोजार, नागरिकताको समस्या संघीयताले सम्बोधन गर्न सक्दैन । विदेश नीति र नागरिकता नीति केन्द्र अन्तर्गत चल्ने गर्छ । त्यही भएर स्वतन्त्र मधेसको कुरा हो ।
त्यसो भए अहिलेका मधेसवादी दलले उठाएको संघीयताको अर्थ छैन ?
–अहिलेको मुद्दाले मधेससँग सरोकार राख्दैन । गलत समाधान हो । तर पनि हामी संघीयता सहितको संविधान भनिरहेका छौं । किनभने संघीयतालाई पनि मधेसी जनताले एक पटक हेरुन् र महशुस गरुन् त्यसपछि स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा उभिन आइपुग्छन् ।
मधेसमा धेरै आन्दोलन भइसके सधै आन्दोलन जनतालाई सास्ती कहिले सम्म ?
–अहिलेसम्म मधेसमा भएका आन्दोलन कि त व्यक्तिको लागि कि त पार्टीको लागि मात्र भयो । मधेसको लागि भएन । स्वतन्त्रताको कुरा यो पार्टी र कुनै संघ संगठनले पाउने होइन । जो सबैले यसमा कुनै नेताले गएर सम्झौता गरेर धोका दिने कुरा हुँदैन । पार्टीले गरेको आन्दोलन होइन । पाएपछि मधेस स्वतन्त्र राष्ट्र भइहाल्छ ।
तपाईँलाई विदेशी शक्तिबाट परिचालित मान्छे भन्छन नि ?
–कसैले उचाल्दैमा कोही मानिस उचालिँदैन । खासमा आफ्नै अनुभतिबाट उठने कुरा हो । आन्दोलनको क्रममा आरोप र आलोचना हुन्छ । हाम्रो आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन अपरिहार्य हुन आउँछ । स्वतन्त्र देश घोषणा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन चाहिन्छ ।
युरोपेली मूलुकका कुटनीतिज्ञहरुले तपाईलाई समर्थन गर्छु भनिसकेका छन् हो ?
– म बारम्बार गिरफतार भएँ । हामीले हाम्रो माग अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनलाई बुझाएका थियौं । त्यही क्रममा युरोपियन युनियनले बोलाएको थियो । हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं । मुद्दामा कुनै बहस भएको होइन । यसलाई पनि सकारात्क लिएका छौं ।
अब कति बर्षभित्र मधेसलाई अलग राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ?
–८ देखि १० बर्ष जनचेतना फैलाउने र आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने । भन्ने थियो मेरो गिरफ्तारीपछि एक्कासी ठूलो रुपमा जनचेतना फैलिएको छ । अहिलेको घटनाक्रम हेर्ने हो भने चाँडो पनि प्राप्त हुन्छ कि भन्ने आशा छ ।
स्वतन्त्र मधेस र स्वायत्त मधेसको बीचमा कतै समाधान भेटिदैन ?
स्वायत्त मधेस भयो भने पनि त्यसमा छुट्टिन पाउने कि नपाइने भन्ने मुख्य कुरा हो । स्वायत्त मधेस लेखाइ दिँदैमा समस्याको समाधान होइन । स्वायत्त मधेस मधेस दिएर कार्यन्वयन गरेको भए समस्याको समाधान हुन सक्दथ्यो । इमान्दारीताको खाँचो देखिएको छ ।
शान्तिपूर्णरुपमा उद्देश्य पुरा नभए फरक वाटो अपनाउने योजना छ कि ?
–छैन, विल्कुल छैन । शान्तिपूर्ण मागमा कति शक्ति छ भन्ने कुरा देखिसकेको छ । शसस्त्र बाटोमा लागेकाहरुले समर्थन पाएनन । हामीले शान्तिपूर्ण बाटोमा शक्ति हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाइ सकेका छौं ।
राज्यले तपाईलाई वार्तामा बोलाएको छैन ?
–यही त विडम्बना छ । न वार्तामा बोलायो न स्पष्टिकरण लियो । एकै चोटी पक्राउ गरेर अदालत पुर्‍यायो ।
देश द्रोहीकोरुपमा जेल सजाय भयो भने के गर्नु हुन्छ ?
–सजाय त भोग्नु पर्‍यो । मान्नु नै पर्‍यो । राज्यले आफ्नो काम गर्छ हामी आफ्नो काम गछौं । २० बर्ष जेल सजाय माग गरिएको छ ।
संविधान भन्दा बाहिर गएर उग्र मुद्दा उठाइरहनु भएको छ सबै शक्तिलाई विस्तापित गरेर छुट्टै राष्ट्र बनाउन सम्भव छ ?
जनताको आकर्षण र जनमत हेर्ने हो भने पुराना शक्तिहरु विस्थापित भइसकेका छन् । उनीहरुले मधेसको अधिकार प्राप्त गर्न असफल भए । उनीहरु छिट्टै विस्तापित हुनेछन्
- See more at: http://www.nepaliheadlines.com/2015-02-25-06-29-13.html#sthash.NZkfosf1.dpuf